जाडोमा बच्चालाई संक्रमणबाट जोगाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ पुष २८, बुधबार २०:१८
जाडो मौसम सुरु हुनासाथ बालबालिकामा विभिन्न संक्रमण र समस्याले सताउन थाल्छ । उसो त जाडो मौसममा विभिन्न उमेरका मानिसलाई संक्रमणले आक्रमण गर्न सक्छ । तर, चिसोको सबैभन्दा बढी प्रभाव बालबालिकालाई नै गर्छ ।
१०. जाडो मौसममा बच्चालाई डायपर लगाएर राख्नु पर्छ र थोरै थोरै समयमा बदल्नु पर्छ । यसरी पनि बच्चालाई सर्दीबाट जोगाउन सकिन्छ ।